Iti yeParsley, izibonelelo kunye neepropathi Discover ➡️ Fumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
1 Yintoni iparsley?
2 Zonke iigram ezili-100 zeparsley ine:
3 Izibonelelo zeti yeparsley
3.1 Ucebile kwi-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory compounds
3.2 I-Turbine amajoni omzimba
3.3 Ukuhlaziya umphefumlo wakho
3.4 Inefuthe lomchamo
4 Iresiphi yeti yeParsley
I-Parsley ngumthi owaziwayo wevumba elimnandi okhuliswa kwindawo ezinemozulu epholileyo. Ukongeza incasa yayo emnandi kunye nokunyusa incasa yokunye ukutya, isityalo sisebenza njenge-diuretic ebalaseleyo, sinceda ukunciphisa ukuqunjelwa.
Iti yeParsley ihlala ityiwa ngabo bakukutya, ibonakalisa ukuba lelona qabane lihle lokunciphisa umzimba. Ikwabizwa ngokuba yi-parsley, imifuno isanciphisa i-cholesterol embi kunye namanqanaba e-triglyceride.
Zonke iigram ezili-100 zeparsley ine:
Amandla: 33 kcal
Iprotheni: 3,3 g
Iipilisi: 0,6 g
Ikhalsiyam: 179 mg
Intsimbi: 3.2 mg
Ifosforasi: 49 mg
IPotassium: 711 mg
Isodiyam: 2 mg
Izibonelelo zeti yeparsley
Ucebile kwi-antioxidant kunye ne-anti-inflammatory compounds
I-Antioxidants yimixube enceda ukukhusela umzimba kumonakalo we-oxidative kunye nokudumba, okunokukhokelela kwizifo ezinganyangekiyo ezinje ngomhlaza, isifo sentliziyo, kunye nohlobo lweswekile 2. Ke ngoko, iti yeparsley ikwanazo nezinto ezinokuthi zibe nezinto ezichasayo. Ukongeza, olunye uphando lubonisa ukuba ukusetyenziswa okwaneleyo kweqabane kunokunceda ukulawula i-cholesterol kunye neglucose yegazi.
I-Turbine amajoni omzimba
Zityebile kwiivithamini C, B12, K no-A, iti yeparsley yonyusa ukuxhathisa amajoni omzimba kwaye ithintela ukubanda. Ikwanceda ukulawula uxinzelelo lwegazi, kuba ine-folic acid, enoxanduva lokugcina intliziyo yomelele.
Ukuhlaziya umphefumlo wakho
Umphunga ombi odla ngokubonakala emlonyeni wabo batya ukutya uyasuswa ngetayi yeparsley. Kungenxa yokuba ine-chlorophyll yoxinaniso oluphezulu, ethintela ukuveliswa kwebhakteria yokuphefumla kakubi.
Iti yeParsley inceda umzimba ukukhupha nokuphelisa ulwelo olugqithisileyo, ngakumbi amanzi kunye netyuwa, esona sizathu sokudumba kwesisu kunye neziphelo ezisezantsi. Ikwanayo nevithamini C kunye neeminerali, ukuyenza kungekuphela kukhetho olufanelekileyo lokutsha kwamafutha, kodwa ikwangumthombo otyebileyo wezondlo ezibalulekileyo.
Iresiphi yeti yeParsley
Iipuniwe ezi-XNUMX zeparsley ecoliweyo
I-1 ilitha yamanzi
Yongeza iparsley emanzini abilayo kwaye ugxobhoze imizuzu emine. Phuma emlilweni.
NgoFebruwari 16, 2020